China 360w Polycrystalline Solar Module ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများ - Rixing Electronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဆိုလာမော်ဂျူး > Polycrystalline Solar Module
360w Polycrystalline solar Module သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ၏ အမြတ်အစွန်းကို အာမခံရန်အတွက် 25 နှစ်ကျော် အလုပ်လုပ်၍ 25 နှစ်ကြာ အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် ပါဝါတန်ဖိုးကျဆင်းမှုသည် 20% လျော့နည်းကြောင်း သက်သေပြပါသည်။ 360 Polycrystalline Solar Module တွင် PID Free နှင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်းပါရှိသည် : module efficiency သည် အဖြူရောင် EVA ဖြင့် 20.24% အထိရှိပြီး power tolerance od module သည် 0+-5W ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သော 360w Polycrystalline Solar Module သည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက်လက်ကားဝယ်ယူရန်ကြိုဆိုပါသည်။Polycrystalline Solar Moduleကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချမှု၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အဆင့်မြင့်၊ လျှော့စျေးနှင့် အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။Polycrystalline Solar Module. ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လျှော့စျေး ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူရန် စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်၊ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ယခုပင် တိုင်ပင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အချိန်မီ အကြောင်းပြန်ပေးပါမည်။
360 Polycrystalline Solar Module သည် ပိုလီဆီလီကွန် ဆိုလာဆဲလ်များ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သုံးစွဲသည့် စွမ်းအင်သည် monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များထက် 30% ခန့် လျော့နည်းသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပိုလီဆီလီကွန်ဆိုလာဆဲလ်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဆိုလာဆဲလ်များ၏ စုစုပေါင်းထွက်ရှိမှု၏ ကြီးမားသောဝေစုအတွက် ရှိနေပြီး ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်သည် monocrystalline silicon ဆဲလ်များထက် လျော့နည်းပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပိုလီဆီလီကွန်ဆိုလာဆဲလ်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် စွမ်းအင်ချွေတာပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပါဝါအထွက် Pmax Wp 340 345 350 355 360
Pmax တွင် ဗို့အား V mpp V 38.4 38.6 38.8 39 39.2
Pmax တွင် လက်ရှိ စစပါခင်ဗျာ။ V 8.86 8.94 9.03 9.11 9.18
အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား Voc A 46.85 47.09 47.34 47.58 47.83
တိုတောင်းသောလျှပ်စီးကြောင်း Isc A 9.37 9.57 9.55 9.64 9.72
Module E ciency Eff % 17.05 17.3 17.55 17.8 18.05
ဆိုလာဆဲလ် (အရေအတွက်/ပစ္စည်း/အတိုင်းအတာ)၊ 144(6*12+6*12)၊ polycrystalline၊ 156.75*156.75mm/158.75*158.75mm
1. ကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ပါ၊ လက်ရှိတွင်၊ polycrystal ၏စျေးနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် crystal single crystal ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်၊ လက်ရှိတွင်သာ၊ ၎င်းသည်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပြောင်းပြန်လှန်နိုင်သည်။
2. အသွင်အပြင်ကိုကြည့်ပါ၊ monocrystalline silicon နက်ပြာရောင်၊ အနက်ရောင်နီးပါး၊ polycrystalline silicon ကောင်းကင်ပြာ၊ တောက်ပသောအရောင်၊ တစ်ခုတည်းသော crystal cell လေးထောင့် arc ပုံသဏ္ဍာန်၊ polycrystalline cell square။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ 360 Polycrystalline Solar Module ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 2004 ခုနှစ်မှစတင်၍ 17 နှစ်ကြာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ 800MW နှစ်စဉ်စွမ်းရည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစျေးကွက်သည်အီတလီ၊ ဂျာမနီ၊ ပိုလန်၊ စပိန်တို့ကဲ့သို့ဥရောပတွင်ဖြစ်သည် ........ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားအရည်အသွေးကောင်းနှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများကိုအမြဲတမ်းပေးစွမ်းသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် .360 Polycrystalline Solar Module ဆိုလာပြားများကို အိမ်ခေါင်မိုးနှင့် ဆိုလာခြံများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြသည် .
ကျွန်ုပ်တို့၏ 360W Polycrystalline နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Module တွင် TUV(EU), CE, ETL(USA), INMETRO(BR), FIDE(MX), CQC(CN), KS(KR)၊ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များပါရှိသည်။
hot Tags:: 360w Polycrystalline Solar Module၊ လက်လီ၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ အစုလိုက်၊ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ စျေးနှုန်းသက်သာ၊ အသစ်ဆုံး၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိရောက်မှု၊ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်၊ Off Grid၊ On Grid၊ TUV၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ စတော့တွင်၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ တရုတ်နိုင်ငံထုတ်၊ စျေးနှုန်းစာရင်း၊ CE၊ 25 နှစ်အာမခံ
360 Poly Solar Module